डोमेस्टिक हेल्परहरु स्थायी बासिन्दा हुंदा के होला ?
Home हङकङ समाचार डोमेस्टिक हेल्परहरु स्थायी बासिन्दा हुंदा के होला ?
अगस्ट ११, हंगकंग। हंगकंगका धनाढ्य मानिसहरुका घरहरुमा काम गर्ने घरेलु सहायकहरुले यहांको स्थायी बासिन्दाको हक पाउने कि नपाउने भन्ने बहस चर्केर गएको छ।
विशेष गरी हंगकंगमा करीब २५ वर्षसम्म घरेलु सहायकको रुपमा काम गर्दै आएकी एक जना फिलिपिनो कामदारले हंगकंगको अध्यागमन विभागबाट लागु गरिएको घरेलु सहायकहरुको लागि नियमावली यहांको आधारभूत कानून विपरित छ भन्ने दावी सहित अदालतमा दायर गरेको मुद्धाको फैसला हुनै लाग्दा उक्त बहस चर्केर गएको हो। अदालतले आगामी अगस्ट २२ मा उक्त मुद्धामा फैसला सुनाउने भएको छ।
घरेलु सहायकको तर्फबाट मुद्धा लड्नेमा यहांकै एउटा राजनीतिक दल सरकार विरोधी खेमाका का सदस्य रहेका एकजना वकिल छन्। ग्लाडिज लि नाम गरेका ती वकिल हंगकंगको सिभिक पार्टीका संस्थापक सदस्य रहेको बताइएको छ।
हंगकंगका सरकार पक्षीय राजनीतिक दलहरु भने घरेलु सहायकहरुले स्थायी बासिन्दाको हक पाउन नहुने कुरा अप्रत्यक्ष रुपमा लिबंग गरिरहेका छन्। केही हप्ता अघि डिएबीले एउटा हंगकंगका बासिन्दाहरुसंग एउटा अध्ययन गरेर आफ्नो पोजिसन बनायो। उक्त डिएबी पार्टीले गरेको अध्ययन अनुसार हंगकंगका करीब ८४ प्रतिशत बासिन्दाहरुले घरेलु सहायकहरुले यहांको स्थायी बासिन्दाको हक पाउन नहुने मत राखेका छन्।
साथै यदि अदालतले घरेलु सहायकहरुको पक्षमा फैसला सुनाएमा तत्काल मात्र हंगकंगमा करीब एक लाख घरेलु सहायकहरु यहांको स्थायी बासिन्दा बन्न लाइन लाग्ने कुरा सरकारी श्रोतहरुले बताउंछन्। विभिन्न अध्ययनहरुले देखाए अनुसार उक्त घट्नाले यहांका स्थानीय बासिन्दाहरुको जीवनस्तर र जीवनशैलीमा गम्भिर असर गर्न सक्ने छ। किनकि घरेलु सहायकहरु आफ्ना मालिकहरुको कोठरीको धन्दाबाट मुक्त भएर स्थायी बासिन्दाको लागि आवेदन भर्नतिर लाग्नेछन् बाहिर धेरै तलब हुने रोजगारी खोज्नेछन् र आफ्ना डिपेन्डेन्टहरु झिकाउन थाल्नेछन्। अनि अहिलेको ३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको वेरोजगारी संख्या ह्वात्तै बढेर १० प्रतिशत पुग्नेछ। ब्जारमा कामदारहरुको संख्या ठूलो र रोजगारी कम भएपछि मानिसहरुले पाउंदै आएको तलब भत्ता पनि घटेर जानेछ। भर्खरै मात्र सरकार समर्थक अर्को पार्टी लिबरल पार्टीले पनि यस्तै खालको अर्को रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। उसका अनुसार पनि उनीहरुको परिवार र बालबच्चाका कारण हंगकंगको सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ। र अहिले सरकारी घरको लागि ३ वर्ष कुर्नुपर्नेमा ६ सात वर्ष कुर्नुपर्ने स्थिति आउनेछ।
हंगकंगमा केही सयको संख्यामा नेपालीहरु पनि घरेलु सहायकको रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन् । तर घरेलु सहायकमै काम गरेकी एकजना नेपाली महिलाका अनुसार नेपालीहरु भने उक्त अदालती फैसलाबाट खासै लाभान्वित हुने छैनन्। किनकि सात वर्ष लगातार बसेको हुनुपर्ने हंगकंगको कानून अनुसार सन् १९९७ अघि काम गर्नेहरु मात्र हंगकंगमा लगातार सात वर्ष बस्न पाउंथे। तत्पश्चात घरेलु सहायकहरु आफ्नो पहिलो दुई वर्षे करार सकिनासाथै अनिवार्य रुपमा आफ्नो देश फर्कनुपर्ने नियम लगाएको छ। र अधिकाश नेपालीहरु सो नियमपछि मात्र हंगकंग आएकाहरु छन्।
घरेलु सहायकहरुले यहांको स्थायी बासिन्दाको हक पाउन हुन्छ कि हुंदैन भन्ने विषयमा हामी हंगकंगे नेपालीको धारणा के हो त? यस पाला हामीले एउटा सर्वेक्षण प्रश्नावलीहरु बनाएका छौं। कृपया तलको लिंकमा गएर उक्त प्रश्नावली भर्नुहोला, नभए यसै समाचार तल आफ्ना कमेन्टहरु लेखे पनि हुन्छ।